> Resource > Mac > Top 3 AVI Players u Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ah)
Raadinta weyn AVI ciyaaryahan Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ah) in kartaa:
1. Radidiyaha tayo wanaagsan video files?
2. fududahay in maraan?
3. U gudub commercials?
4. Bookmark jecel video goobaha internetka?
5. Qorsheyso hawlo?
Qeybta 1: AVI Players u Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ah)
Qeybta 2: Isbarbar of 3 Top ku AVI Players
Qeybta 3: Alternative AVI Player: Video Converter Ultimate
Qaybta 1aad: The AVI Player for Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ah)
1. Radidiyaha ku dhowaad nooc kasta oo ah qaabab file video.
2. Simple, si degdeg ah oo sameecadda ah loo maqli karo.
3. Taageerada qaabab talooyin kala duwan.
4. interface dareen leh oo user-friendly.
Sida loo isticmaalo Wondershare Player
Diyaarinta: dejisan iyo rakibi Wondershare Player u rogtid oo aad Mac ama PC. Tutorial hoose waxay ku salaysnaan doonaa version Mac ah (Yosemite & Mavericks ka mid ah):
Tallaabada 1. Upload ama aad AVI video files
Waxaad dooran kartaa in aad geliyaan AVI video files ka buugga deegaanka, kaydinta drive adag ama xataa download it ka aad jeceshahay online video goobta. Halkii iyaga ku daray mid mid, si fudud u jiidi-iyo-hoos u faylasha gal ciyaaryahanka.
Tallaabada 2. Diyaarso playbacks (ama fursadaha kale)
Haddii aad jeceshahay inaad daawato aad videos in playlist ah, had iyo jeer waxaad ku dari kartaa playlist cusub ama waxa loop sida ay doorashada. Waxa kale oo jira button deg deg ah in ay la wareegaan si dhekhso deg deg ah ama si ay u helaan jecel goobaha online aad bookmarked.
In la barbardhigo in ciyaaryahanka warbaahinta VLC, MPlayer ma aha in loo jecel yahay. Si kastaba ha ahaatee, weli waa mid ka mid ah ugu balaadhan looga isticmaalaa video ka mid ah dadka isticmaala Mac ciyaartoyda. Waxaa u ciyaaraa inta badan oo ka mid ah qaabab file caan ah oo ay ka mid yihiin MPEG, VOB, AVI, ASF, WMA, wmv, cancer, QT, MOV, MP4, OGG, OGM, RealMedia, Matroska, lowska, NuppelVideo iyo wax ka badan. Waxaad isticmaali kartaa inuu u ciyaaro AVI on Mavericks ama Mountain Libaaxa si fudud.
TheVLC ciyaaryahan warbaahinta ayaa qiyaastii muddo dheer iyo soo bandhigidda Cinwaan waa badan u nuglaa. Waxay bixisaa customizabile kale qarbeddada ayaa sidoo kale visualizer, laakiin waqti isku mid ah waxay u baahan tahay isticmaalka weyn processor xasuusta. Kale oo ka OS X Mac ah, waxaa sidoo kale la jaan qaada si loogu isticmaalo Windows iyo sidoo kale Linux ka hawlgala nidaamyada.
Tag VLC Media _1_694_1 _ >>
Qeybta 2: Isbarbar oo ka mid ah Top 3 AVI Players
Radidiyaha ee AVI video files
Taageero qaab Input
Goobaha online Bookmark
Xayeysiis Clear ama delete
Tayada loo maqli karo
Interface isbedel (ama haragga)
U baahan isticmaalka xasuusta processor yar
Qeybta 3: Alternative AVI Player: Video Converter Ultimate for Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ah)
1. taageero Wide ee aqbasho qaabab loo maqli karo.
2. taageero badan oo qaab wax soo saarka ah ee diinta.
3. badalidda videos aan khasaaro tayo leh.
4. Download ka video goobaha internetka.
5. Edit iyo gubi videos galay DVD ah.
Taageerada Wide ee Qaabka File
Tani ciyaaryahan AVI kale oo aan kuu ogolaanayaa oo kaliya in aad Radidiyaha aad AVI video files, laakiin sidoo kale kale video files in la qabtay telefoonka gacanta, kaamirada ama fiidiyo.
editor An gudaha si ay kaaga caawiyaan in aad xaalkaa aad video clips mar kasta oo aad rabto, ka qabsado macaamiloon inay iska sidoo kale falinjeeerka ama la tirtiro goobaha aan la rabin.
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa videos ka goobood oo aad jeceshahay online sida YouTube, vimeo, Hulu iyo wax ka badan ka hor diinta loogu loo maqli karo labada aad TV ama qalabka la qaadi karo.
DVD Creator Iyo gubi
Customization Simple ee DVD menu iyo xal habboon in la kaydiyo aad video Maktabada weyn galay DVD ama image file ISO ah.
Desktop kasoo horjeeddo Online converters
Talinayo Video qaabab
Wixii Samsung Galaxy Taxanaha S
Ku dar Cinwaan in Videos
Dhig Own Video DVD